Adeegyada Cusub ee 'Cloud' Cloud Cloud ee Kaabayaasha Injineeriyada Kaabayaasha Dhaqaalaha - Geofumadas
Mataanaha dijitaalka ah ayaa galaya dariiqa ugu weyn: shirkadaha injineerinka iyo milkiileyaasha milkiileyaasha ah. Ku dhaqaaq himilada mataanaha dhijitaalka ah
SINGAPORE - The Sanad ku jirta Kaabayaasha Infrastructure 2019- Oktoobar 24, 2019 - Bentley Systems, Incorporated, bixiyaha caalamiga ah ee softiweer dhammaystiran iyo adeegyada daruuriga ah ee mataanaha dhijitaalka ah, ayaa soo bandhigay adeegyo daruur oo cusub oo loogu talagalay kaabayaasha injineernimada kaabayaasha. Mataanaha dhijitaalka ah waa matalaad dijitaal ah oo ku saabsan hantida jireed iyo macluumaadkooda injineernimada, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay fahmaan oo ay ku daydaan waxqabadkooda adduunka dhabta ah inta ay ku jiraan meertada noloshooda. Xaqiiqdii, mataanaha dhijitaalka ah ee “evergreen” ayaa kor u qaadaya BIM iyo GIS illaa 4D.
Keith Bentley, aasaasaha iyo sarkaalka ugu sareeya teknolojiyada, ayaa yiri: "Maanta" da'da mataanaha dhijitaalka "ayaa socda, xawaarehiisuna maalinba maalinta ka dambeysa ayuu sii socdaa. Isticmaalayaashii ugu horreeyay ee aan la shaqeynay waxay durba ku fadhiyaan jagooyinka hoggaaminta dhaqaalaha mataanaha cusub ee dhijitaalka ah, xagga wax soo saarka cusub ee hawlahooda ganacsi iyo moodalkooda ganacsi. Faa'iidooyinka laga helo iyada oo la beddelayo sannado badan oo qulqulka qalliinka shaqada ah ee waraaqaha lagu qoro, oo leh furan, nool, la isku halleyn karo iyo mataano dijitaal ah oo xilliyeed ah ayaa aad u weyn. Ku soo biiritaanka taas oo leh bay'ada hal abuurka iyada oo loo marayo ilo-furan oo furan waxay abuurtaa xoog aan la xakamayn karin oo isbedelka kaabayaasha ah. Ma xasuusto waqti aad u xiiso badan xagga xirfadaha kaabayaasha ama Nidaamka Bentley. "
Howlaha cusub ee daruuriga Digital Twins
Adeegyada ITwin waxay u oggolaaneysaa shirkadaha injineeriyadda in ay abuuraan, ka dhabeeyaan oo ay falanqeeyaan mataanaha dijitaalka ah ee kaabayaasha iyo hantida. Adeegyadawinwinwinwin waxay iskuxiraan maadada injineeriyada dhijitaalka ah ee qalabka naqshadeynta BIM iyo ilaha xogta oo badan, gaarista "4D aragtida" ee mataanaha dhijitaalka ah, iyo duubista isbedelada injineernimada inta lagu gudajiro jadwalka / hantida, si loo bixiyo diiwaan mas'uul ah oo ah kii beddelay waxa iyo goorta. Kooxaha injineeriyada waxay adeegsanayaan Adeegyada Adeegga Kheywin si ay u fuliyaan dib u eegista iyo ansaxinta xogta naqshada iyo soosaaraan fikradaha / fikradaha naqshadeynta. Isticmaalayaasha codsiyada naqshadeynta Bentley waxay dalban karaan adeegga Adeegga Dib-u-eegista eewinwin Design ee dib-u-eegista naqshadda ad hoc, iyo kooxaha mashruuca isticmaalaya ProjectWise waxay ku dari karaan adeegga Adeegga Dib-u-Eegista eewinwin ay qulqulka shaqadooda dhijitaalka ah u fududeyso mataanaha digital-ka ah mashruuc guud ahaan.
PlantSight waa deeq ay si wada jir ah u soo saareen Bentley Systems iyo Siemens, taas oo siinaysa milkiile-wadayaasha iyo injineerradooda awood ay ku abuuri karaan mataano dijitaal ah oo dijitaal ah oo hawlgal ah. PlantSight waxay taageertaa hawlgallada, dayactirka, iyo injineernimada si loogu helo xog mataano dijitaal ah oo la isku halleyn karo oo sax ah hab dhex dhexaad ah, oo ay ku jiraan P&ID, moodooyinka 3D, iyo xogta IoT.
Waxay bixisaa aragti gaar ah oo dhab ah nooc moodaaleed macluumaad la ansaxiyay, waxay fududeysaa sirdoonka xaalad, khadka aragtida iyo wacyiga xaaladda. PlantSight waxaa si wada jir ah u soo saaray Bentley iyo Siemens iyagoo adeegsanaya Adeegga Kheyrin waxaana ganacsi ahaan ka jira shirkado kasta.
Adeegga Hantida Imtixaanada eewinwin wuxuu u oggolaanayaa milkiileyaasha wadayaasha ah ee adeegsada AssetWise inay isku waafaqaan xogta waxqabadka hantida iyo falanqaynta hawlgalka ee macnaha mataankooda dijitaalka ah, taasoo ka dhigaysa macluumaadka injineernimada inay u helaan dhagaystayaasha ballaaran ee adeegsadayaasha iyada oo loo marayo khibradaha adeegsada isla markaana caqli gal ah. Adeegga Hantida Imtixaanka 'Mattwin Immersive Asset' wuxuu muujinayaa "qodobbada muhiimka ah" ee waxqabadka iyo isbeddelada heerka hantida waqti ka dib, taas oo horseed u ah go'aan qaadashada dhaqso leh oo si wanaagsan loo wargaliyo taas oo ugu dambeyntii gacan ka geysaneysa hagaajinta waxqabadka hantida iyo shabakadda.
Mataanaha dhijitaalka ah ayaa gala goobta ugu weyn
Xaqiiqada jireed ee joogtada ah ee isbedelka hantida horey loo shaqeeyey way adkeyd in si qaab ahaan loo qabto oo loo cusbooneysiisto. Intaa waxaa sii dheer, macluumaadka injineernimada u dhigma, ee noocyadeeda faylasha ee iswaafaqsan iyo is-beddelka joogtada ah, wuxuu caadi ahaan ahaa "xog mugdi ah", muhiimad ahaan aan la heli karin ama aan macquul ahayn. Iyada oo leh adeegga mataanaha daruuriga ah ee dhijitaalka ah, Bentley waxay ka caawineysaa dadka isticmaala inay abuuraan oo doortaan mataanaha dhijitaalka ah si loo wanaajiyo howlgalka iyo dayactirka hantida jirka, nidaamyada iyo howlaha dhismaha, iyada oo loo marayo muuqaalka bilowga ah ee 4D iyo aragtida falanqaynta.
Sannadkii Bentley ee Kaabayaasha Shirka 2019, horumarinta mataanaha dhijitaalka ah ayaa lagu soo bandhigay mashaariicda kama dambaysta ah ee 24 ee qaybaha 15, meelo ka mid ah dalal ku yaal 14 oo ka kooban gaadiidka, shabakadaha biyaha iyo dhirta daaweynta, ilaa dhirta korantada, dhirta birta. iyo dhismayaasha Guud ahaan, magacaabista 139 ee qaybaha 17 waxay xustay ujeedka mataanaha dijitaalka ah ee loogu talagalay hal-abuurka loo isticmaalay mashaariicdooda, koror weyn oo ku yimid magacaabida 29 ee la xiriirta 2018.
Fikradaha ku saabsan Mataanaha Digital ee ku jira tallaabada
Markii lagu jiray casharkii teknolojiyadda, Keith Bentley wuxuu ku soo biiray masraxa isaga iyo wakiillo ka socda Sweco iyo Hatch, oo muujinaya fikradaha mataanaha kaabayaasha dijitaalka ah ee hawl gala.
Sweco si ku-meel-gaadh ah loogu daray mashruuc nidaamka tareenka taraafikada ah oo sagaal kiiloomitir u socdo magaalada Bergen ee dalka Norway. Kordhinta nidaamka jira ayaa si buuxda loogu maareeyay iyada oo loo marayo moodooyinka 3D BIM, laga bilaabo daraasado kale oo lagu beddelay naqshad injineer oo faahfaahsan. Adeegsiga adeegyada Adeeggawinwin wuxuu u oggolaaday Sweco inuu si toos ah ula socdo isbeddelada isla markaana yareeyo khaladaadka, isagoo u oggolaanaya aragtida 4D.
Hatch dhammeystiray suuragalnimada, suuragalnimada iyo injineer faahfaahsan ee rakibaadda aashitada acid ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Qalabka naqshadeynta dhirta ee Bentley wuxuu u oggolaaday kooxda mashruuca inay qaabeyaan mataano digital ah oo dhammeystiran oo caqli badan heerka ugu weyn ee faahfaahinta, iyagoo u dhaqaajinaya hanaannada tayada injineernimada oo qeyb ka ah dadaallada moodelista ee 3D, marka la barbar dhigo geedi socodka Tayada oo ku saleysan sawiro dhaqameed. Hatch wuxuu awooday inuu yareeyo kororka waxsoosaarka ka dib markii la bilaabay lix bilood ilaa usbuuc.
Microsoft Wuxuu abuurayaa tusaalooyin mataano dijital ah xaruntiisa Aasiya ee Singapore iyo xeradiisa Redmond. Kooxda Microsoft Real Estate iyo Security waxay fulinayaan hanaan ku saabsan Wareegga Dhismaha Nolosha Dijital ah si kor loogu qaado waxqabadka dhismaha, macaashka, qancidda shaqaalaha, waxsoosaarka iyo amniga. Dadaalka Microsoft ee lagu abuurayo wakiillada dijitaalka ah ee hantida jirka sida dhismayaasha waxay ku saleysan yihiin Microsoft Azure Digital Twins, waa adeeg IoT oo ka caawiya ururada inay abuuraan moodallo dijitaal oo buuxa oo jawiga jireed. 'Azure Digital Twins' ayaa loo daayay dadweynaha oo loo sii daayay '2018' waxaana hadda qaadanaya macaamiisha Microsoft iyo la-hawlgalayaasheeda adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Bentley adeegyadeeda 'Rumwin Services'. Shirkaduhu waxay si wada jir ah uga shaqeynayaan sidii ay u abuuri lahaayeen mataano cusub oo Digital ah xarumaha cusub ee Microsoft ee ku yaal Singapore.
Nidaamka mataanaha dhijitaalka ah
Labadaba Adeegyada Adeegga iTwin iyo PlantSight waxaa lagu horumariyey il-furan oo iModel.js oo loogu talagalay mataanaha dhijitaalka ah, oo markii ugu horreysay la bilaabay bishii Oktoobar ee 2018 isla markaana gaadhay heerkiisii ​​1.0 bishii Juun ee 2019. Sababta ugu weyn ee loo furayo furaha iModel.js waa in la kobciyo hab-nololeedka hal-abuurnimada ee loogu talagalay mataanaha barnaamijyada mataanaha dhijitaalka ah, milkiilayaasha, injineerada iyo kuwa isku-dhafan ee dhijitaalka ah.
Mid ka mid ah kuwa soosaarayaasha barnaamijyada hab-dhismeedka deegaanka waa vGIS Inc., oo adeegsaday iModel.js si ay ugu dhexgalaan xalka dhabta ah ee isku dhafan (XR) qulqulka kaabayaasha dhijitaalka ah. Qalabka mobilada dhabta ah ee isku dhafan ee muuqaalka leh ayaa ku darsada moodooyinka nashqadeynta mashruuca leh xaqiiqda, duurka, waqtiga dhabta ah. Isticmaalayaasha duurka ku jira ayaa arki karaya adeegyada tamarta hoosaadka, sida tuubooyinka iyo fiilooyinka, oo lagu daro hanuuninta adduunkooda dhabta ah. Isticmaalayaasha ayaa si fudud u tilmaamaya ashyaa'da aaladooda mobilada si ay u arkaan walxaha naqshada ee mashruucan macnaha guud.
Alec Pestov, aasaasaha iyo maamulaha vGIS, wuxuu yiri: “Dhismaha iModel.js waa il weyn oo horumarineed iyo isku dhafida aalado iyo adeegyo qiimahooda lagu daray, sida xaqiiqada sare looqaaday iyo xalka dhabta ah ee isku dhafan ee ay bixiso vGIS. Waxaan jecel nahay wada shaqeynta kaamil ah ee adeegaha adeegyadawinwin iyo wadada horumarka aan xurgufta lahayn si aan u gaarno is dhexgalkaas qumman, waxaana rajeyneynaa inaan balaarino awooda wada shaqeynteena, iyadoo loo sii marayo adeegyada Kheyraadkaha '.
Qeexida mataanaha Digital
Mataanaha dhijitaalka ah waa matal dijitaal ah oo hantiyeed iyo qaab dhismeedka jir ahaaneed ee ku xeeran deegaankooda, halkaas oo macluumaadkooda injineeriyada uu ku qulqulayo, si loo fahmo loona qaabeeyo waxqabadkooda. Sida hantida dhabta ah ee ay matalaan, mataanaha dhijitaalka ah ayaa had iyo jeer isbeddelaya. Si joogto ah ayaa looga cusboonaysiiyaa ilo badan, oo ay ku jiraan dareemayaal iyo dayuurado, si ay ugu matalaan gobolka waqtiga saxda ah ama xaaladaha shaqada ee hantida kaabayaasha jirka ee dunida. Runtii, mataanaha dhijitaalka ah, - iyagoo isku darka Xaaladda dhijitaalka ah iyo qaybaha dijitaalka ah la socota Taariikhda dhijitaalka ah, BIM iyo GIS waxay horay ugu sii marayaan 4D.
Faa'iidooyinka Mataanaha Digital ah
Mataanaha dhijitaalka ah ayaa u oggolaanaya adeegsadayaasha inay arkaan hantida oo dhan, iyagoo adeegsanaya biraawsar bog, kiniin ama madax madaxeedno isku dhafan; awood u yeelashada inaad hubiso xaalada, sameyso falanqeyn iyo dhalinta macluumaad si loo saadaaliyo loona habeeyo waxqabadka hantida. Isticmaalayaashu waxay u dhisi karaan si qotodheer ka hor dhismaha jir ahaanta, qorshaynta iyo baabi'inta howlaha dayactirka ka hor intaanay fulin adduunka dhabta ah. Hadda waxay leeyihiin kombuyuutarro u diyaarsan sidii ay u arki lahaayeen boqolaal xaaladood, kana faa'iideysan karaan barashada mashiinka si ay isbarbar dhigaan qaababka kale ama istiraatiijiyadaha dayactirka, uguna kobciyaan cabbirro badan. Muuqaalka iyo aragtida guud ee xogta injineernimada waxay kuu horseedaa go'aan qaadasho heersare ah go'aan qaadashada iyo kaqeyb galayaasha inta lagu gudajiro wareega hantida.
Ku saabsan Bentley iTwin Services
Adeegyada ITwin ayaa u oggolaanaya kooxaha mashruuca iyo hawl-wadeennada lahaanshaha inay abuuraan, ku sawiraan 4D oo ay falanqeeyaan mataanaha dijitaalka ah ee hantida kaabayaasha. Adeegyada ITwin waxay u oggol yihiin maamulayaasha macluumaadka dijitaalka ah inay ku daraan macluumaadka injineernimada ee ay abuureen aaladaha naqshadaha kala duwan ee mataanaha dijitaalka ah ee tooska ah isla markaana ay ku waafaqaan qaabaynta dhabta ah iyo macluumaadka kale ee la xiriira, iyada oo aan la carqaladeynin aaladaha ay hadda wadaan ama howlaha ay wadaan. Isticmaalayaasha ayaa daawan kara oo la socon kara isbeddelada injineeriyada ee ku dhaca jadwalka mashruuca, iyagoo bixinaya diiwaan mas'uul ah oo ah kii beddelay waxa iyo goorta. Adeegyada ITwin waxay bixiyaan macluumaad la taaban karo ee loogu talagalay kuwa ku lug leh go'aan qaadashada dhammaan ururka iyo wareegga nolosha ee hantida. Isticmaalayaasha sameeya go'aannada ka warqabta ee wanaagsan, waxay filayaan kana fogaadaan dhibaatooyinka kahor intaysan dhicin, oo si dhaqso leh uga falceliya kalsooni buuxda, taasoo u tarjumeysa kaydinta kharashka, helitaanka adeegga oo la wanaajiyey, saamaynta bey'ada ee hoose iyo amniga.
Ku saabsan Nidaamyada Bentley
Nidaamyada 'Bentley Systems' waa hormuudka ugu weyn ee bixiya xalka kumbuyuutarrada ee injineerada, naqshadeeyayaasha, xirfadleyda geospatial, kuwa wax dhisa iyo kuwa ka shaqeeya dhismaha qaabeynta, dhismaha iyo howlaha, oo ay ku jiraan howlaha guud, howlaha guud, dhirta warshadaha iyo magaalooyinka dhijitaalka ah. Codsiyada moodellada furan ee ku saleysan Bentley iyo barnaamijyadooda jilitaanka furan waxay dardar gelinayaan is-dhexgalka naqshadeynta; Mashruucaaga Mashruucaaga WWW iyo SYNCHRO wuxuu dardar gelinayaa gaarsiinta mashruuca; iyo AssetWise waxay soo bandhigaysaa dardargelinta hanti iyo waxqabadka shabakada. Daboolida injineernimada kaabayaasha, adeegyada Bentley ee adeeggawinwin ayaa hormarinaya aasaas ahaan BIM iyo GIS iyada oo loo marayo mataanaha dhijitaalka ah ee '4D'.
Nidaamyada Bentley waxay shaqaaleysiiyaan wax kabadan asxaabta 3.500, waxay abuuraan dakhliya sanadle ah $ 700 milyan wadamada 170 waxayna ku maal gashadeen wax kabadan $ 1 bilyan baarista, hormarinta iyo soo iibsiga 2014. Tan iyo markii la aasaasay 1984, shirkadu waxay ahayd hantida ugu badan ee shanta aasaasaheeda, walaalo Bentley. Www.bentley.com
Post Previous" Hore «EthicalGEO» - baahida loo qabo in dib loo eego halista isbeddellada geospatial
Post Next Sannad kale, taariikh kale, waayo-aragnimo kale oo aan caadi ahayn… Taasi waxay ii ahayd YII2019!Next »